လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အမြဲတမ်းစမတ်ကျသောလူ့ ဦး နှောက် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
By GRETCHEN Reynolds, New York Times ကို
အဘယ်သူ၏သန်နိဋ်ဌာနျ 2013 အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့နည်းနည်းမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ပါသည်မည်သူမဆိုလူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုထွန်းသစ်စသိပ္ပံနည်းကျအမြင်စဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။ ဒါဟာသန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ outrun နှင့်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကျော်အရှိဆုံးအခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများ outwalk နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ယနေ့လိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက် shaped နှင့်သွေးလှုပ်ရှားမှုအသုံးပြုပုံစိတ်ကူးသွားသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဦးနှောက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်သည်ဆက်လက်ခဲ့ကြသည်။
လူသားတို့ပုံဖော်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်၏အခန်းကဏ္ဍကိုမနုဿဗေဒပညာရှင်စိတ်ဝင်စားနှင့်အချို့သောအချိန်များအတွက်ရေပန်းစားစိတ်ကူးစိတ်သန်းမြိ်ု့သိရပါတယ်။ 2004 မှာဟားဗတ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကဒံယလေအီး Lieberman နှင့် Utah တက္ကသိုလ် Dennis M. ဆူးပင်အမည်ရဂျာနယ်တွင်သဘာဝတရားထဲမှာက Seminal ဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ “ ခံနိုင်ရည်ရှိရှိပြေးခြင်းနှင့် Homo ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်” သောသူတို့သည်ငါတို့ bipedal ဘိုးဘေးတိရစ္ဆာန်များကျဆင်းသွားသည်တိုင်အောင်, သက်သက်ကတော့အောင်မြင်မှုမရသေးမှတဆင့်လျင်မြန်လုယူရာဥစ္စာခေါ်ခဲ့နိုင်ခံနိုင်ရည်အားကစားသမားများ, ဖြစ်လာရွရွပြေးခြင်းနှင့်တလျှောက်သူတို့ကိုနောက်ကွယ်က plodding အားဖြင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ကြောင်း posited ။
ခံနိုင်ရည်အစွမ်းအစောပိုင်း joggers သူတို့ရဲ့ဗီဇရှောက်ဆိုလိုရာမိတ်လိုက်ဘို့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပေးသောအစားအစာများ, ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, သဘာဝရွေးချယ်ခြင်းကို ပို. ပင်အားကစားဖြစ်လာစောစောသောလူသားမြားမောင်းဒေါက်တာ Lieberman နှင့်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များဖြောင့်မတ်လူနာတင်ယာဉ်စဉ်အတွင်းချိန်ခွင်လျှာနှင့်တည်ငြိမ်ရေးထိန်းသိမ်းရန်ရှည်ခြေထောက်, တိုတောင်းခြေချောင်း, လျော့နည်းဆံပင်များနှင့်ရှုပ်ထွေးအတွင်းစိတ်-နားကိုယန္တရားများဖွံ့ဖြိုးဆဲသူတို့၏အလောင်းများကိုရေးထားပြီ။ လပ်ြရြားမြလူ့ခန္ဓာကိုယ် shaped ။
ယနေ့လူသားများတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်ခန့်မှန်းထားသည်ထက်သုံးဆပိုကြီးသော ဦး နှောက်ရှိသည်ဟုမနုropဗေဒပညာရှင်များကကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များ၏ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကိုအခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဖြေပေးသည်။
ထိုထူးခြားသော ဦး နှောက်များကိုရှင်းပြရန်ဆင့်ကဲသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အသားစားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းဘိုးဘေးများ၏လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလိုဖြစ်ပျက်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အစောပိုင်းလူသားများသည်ရှုပ်ထွေးသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံများကိုလိုအပ်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်အမဲလိုက်ခြင်းကိုအစီအစဉ်ချပြီးစီမံကွပ်ကဲရမည်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းအယူအဆအရ, ဦး နှောက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်ကမောင်းနှင်ခဲ့သည်။
ကြောင်းနိဂုံးချုပ်ရောက်ရှိဖို့မနုဿဗေဒပညာရှင်တို့ကစတင်ခဲ့ လက်ရှိဒေတာမှာရှာဖွေနေ ခွေး, guinea ဝက်, မြေခွေး, ကြွက်, ဝံပုလွေ, ကြွက်, ကြောင်ကတိုးကြောင်, ဘမ်းမိသောစိုင်, mongeese, ဆိတ်, သိုးနဲ့ elands အပါအဝင်နို့တိုက်သတ္တဝါများအမျိုးမျိုးအတွက်ဦးနှောက်အရွယ်အစားနှင့်ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့။ သူတို့ကထူးဆန်းသောပုံစံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယူဆရထောငျစုနှစျကျြောပြောင်းလဲခဲ့သောမြင့်မားသောပင်ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်, ခဲ့ခွေးတွေနဲ့ကြွက်နှင့်တူမျိုးစိတ်ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားဆွေမျိုးကြီးမားတဲ့ဦးနှောက် volumes ကိုရခဲ့တယ်။
အဆိုပါသုတေသီများလည်းကြွက်နှင့်ကြွက်စနစ်တကျမာရသွန်အပြေးသမားဖြစ်ရပ်ကြီးခဲ့ကြသည့်အတွက်မကြာသေးမီစမ်းသပ်ချက်မှာကြည့်ရှုကြ၏။ လိုလိုလားလားဘီး running အပေါ်အများဆုံးမိုင်အတွက်ထားကြောင်း Lab မှတိရိစ္ဆာန်များကိုပြေးမှာလွန်ကဲကြောင်းဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များတစ်လိုင်း၏ဖန်တီးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, interbred ခဲ့ကြသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမျိုးစုံသားစဉ်မြေးဆက်ပြီးနောက်ဤတိရိစ္ဆာန်များဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်, ဒါမှမဟုတ် BDNF ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းအပါအဝင်တစ်ရှူးတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ကြောင်းတ္ထုများပင်မြင့်မား, ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာသည်။ ဤရွေ့ကားတ္ထုများခံနိုင်ရည်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ သူတို့ကအစကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမောင်းထုတ်ရန်လူသိများကြသည်။
ဒီနည်းလမ်း၏အဘယျအပေါငျးတို့သညျဒါဝိဒျအေ Raichlen, အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်မှမနုဿဗေဒပညာရှင်တစ်ဦး၏တစ်ဦးကိုရေးသားသူကပြောပါတယ် လူ့ဦးနှောက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. အသစ်သောဆောင်းပါး တော်ဝင် Society ကဇီဝဗေဒ၏တရားစွဲဆိုထား၏ဇန်နဝါရီလကိစ္စ၌ထင်ရှားကျော်ကြားသော, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအစောပိုင်းလူသားမြားသမတ်စေရန်ကူညီပေးခဲ့စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းမုဆိုးစုဆောင်းသည့်ဘိုးဘေးများတွင်“ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်” ဟုသူကဆိုသည်။ အားကစားနှင့်တက်ကြွစွာရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များနည်းတူ BDNF ၏မြင့်မားသောအဆင့်များအပါအဝင်ဇီဝကမ္မလက္ခဏာများကိုဖြတ်သန်းသွားသည် နောက်ဆုံး၌ဤအစောပိုင်းအားကစားသမားများသည်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြတ်သန်း။ BDNF အလုံအလောက်သွားလာနိုင်ပြီးအချို့သည်ကြွက်သားမှ ဦး နှောက်သို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပြီး၎င်းသည် ဦး နှောက်တစ်သျှူးကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
သူများသည်အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းလူသားမြားသထို့နောက်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောငျ့ကနေအကောင်းဆုံးအောင်ကျွေးခြင်းနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်လာ, ပိုကောင်းတဲ့ခြေရာခံလုယူရာဥစ္စာဆီသို့ထင်နှင့်အကြောင်းပြချက်မှ၎င်းတို့၏ကြီးထွားလာနိုင်စွမ်းလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ရွေ့လျားမှုအတွက်ဖြစ်ခြင်းစမတ်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းနှင့်စမတ်ဖြစ်ခြင်းယခုသူတို့ကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
နှင့်ဤသူအပေါင်းတို့ထဲက, နောက်ဆုံးမှာအဆင့်မြင့်သင်္ချာနားလည်နှင့် iPad တီထွင်ဖို့စွမ်းရည်ကိုရောက်လာတယ်။ သို့သော်အချို့သောအချိန်အကြာဖြစ်ခဲ့သည်။
အခုအသစ်အယူအဆ၏ကျယ်ပြန့်အမှတ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံပုံသှငျးဖို့အကူအညီပေးခဲ့လျှင်, သူကအများစုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ယနေ့ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်, ယောဟန်ဃ Polk, Urbana မှာအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှမနုဿဗေဒ၏တွဲဖက်ပါမောက္ခကပြောပါတယ် အသစ်ကဆောင်းပါး၏ဒေါက်တာ Raichlen အတူ -Champaign နှင့် co-စာရေးသူက။
ထိုအယူအဆအတွက်သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအရ“ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း” သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကိုပိုမိုသန်မာစေပြီး၊
ဟုတ်ပါတယ်, လုယူရာဥစ္စာပြီးနောက်ရွရွပြေးလူ့ဦးနှောက်ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မောင်းထုတ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်သောအယူအဆ့အယူအဆဒေါက်တာ Raichlen ကပြောပါတယ်နီးပါး unprovable ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးအသစ်၏စာရေးဆရာများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ Dr. “ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျန်းမာတဲ့စိတ်တို့အကြားဆက်နွယ်မှုအတွက်နက်ရှိုင်းသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အခြေခံရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မသဘောတူတယ်” ဟုသူကဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း“ သင်၏မှတ်ဥာဏ်ကိုအဝေးရောက်ရန်” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန်အစွမ်းထက်သည့်မက်လုံး။